Apartment Sasha entliziyweni Belgrade
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIva
Ndingathanda ukukwamkela kwiApartment yam iSasha. Indawo yam ikwiziko lembali laseBelgrade, kufutshane nemibono emihle, umlambo, iindawo zokutyela kunye nokutya, kunye nobomi basebusuku. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yendawo egqibeleleyo, i-ambiance, ubumelwane, ukukhanya, kunye nangenxa yethala elincinci elijonge esinye sesona sitrato sidala esixekweni. Indawo yam ilungele izibini, iintsapho ezincinci, abantu abahamba bodwa, kunye nabahambi beshishini. Yonwabela :)
Yonke le ndawo yeyakho!
4.94 ·Izimvo eziyi-214
4.94 · Izimvo eziyi-214
I-Apartment ikwesona sitrato sidala eBelgrade. Le nxalenye yedolophu ibizwa ngokuba yi-Old town kwaye ikufuphi kakhulu nenqaba yaseKalemegdan, isitalato saseKnez Mihailova, umlambo, ibhulorho yaseBranko kunye neNovi Beograd. Kwakhona, imyuziyam yeSizwe kunye neThiyetha yeSizwe yimizuzu eli-10 yokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Iva
Ndifumaneka kuyo yonke imibuzo yakho ngalo lonke ixesha. Ungandiqhagamshelana nam apha okanye ku-Airbnb, nge-imeyile yam okanye kwiselfowuni yam. Ndisebenzisa i-WhatsApp kunye neViber ngokunjalo!